Magadzirirwo eGloves Anogadzirwa Huanna
Kuti ugare wakagwinya uye uine hutsanana, magurovhosi edu anokwanisa kuraswa anokwanisa kusarudza. Yakagadzirwa kubva kune yakasimwa-yakavakirwa zvinhu (PLA), iwo ari zana% inogadzikana uye inogadziriswa. Semuenzaniso, ivo vanodzikisira zvizere nemazuva zana nemakumi masere munzvimbo yekugadzira manyowa. Kana iri munharaunda yechisikigo, izvo zvinhu zvinotora makore matatu kusvika mashanu kuti zvidzikise zvachose.
Kurema: 100-140G Ukobvu: 2.1 micron
Usage: Kuchenesa, Kuchenesa, Kushambidza, Kuzviparadzanisa neMafuta uye Guruva Chokunze Chinyorwa: PLA
Zvinhu: Pla, PBAT, 100% Biodegradable PLA Nzvimbo yeKutanga: Shanghai, China
Zita Rekushandisa: NATUREPOLY Model Nhamba: HNM-GLO01
Chigadzirwa Chigadzirwa: Biodegradable Disposable Gloves Saizi: Saizi imwe
Ruvara: Zvakajeka Chitupa: Chikafu Giredhi Chitupa, biodegradablility chitupa
Feature ： Biodegradablitiy, kuenderera,
Smooth uye Flexible pamusoro MOQ: 2000boxes
Logo: Customizable Kurongedza: 100pcs pabhokisi
Kuti ugare wakagwinya uye uine hutsanana, magurovhosi edu anokwanisa kuraswa anokwanisa kusarudza. Yakagadzirwa kubva kune yakasimwa-yakavakirwa zvinhu (PLA), iwo ari zana% inogadzikana uye inogadziriswa. Semuenzaniso, ivo vachadzikisira zvizere nemazuva zana nemakumi masere munzvimbo yekugadzira manyowa. Kana iri munharaunda yechisikigo, izvo zvinhu zvinotora makore angangoita matatu kusvika mashanu kuti zvidzikise zvachose. Naizvozvo, zvigadzirwa zvedu ndezvakanakisa sarudzo kana iwe uchida kudzivirira nharaunda. Izvi zvinogadzirwa zvakakwana kuresitorendi uye kushandiswa kwepamba, kana chero nzvimbo dzeruzhinji uko hutsanana huri pamberi. Kana iwe uchida kushandisa magirobhu anoraswa uye kugara wakasvibirira, shandisa edu PLA Gloves. PLA Gloves ndiyo mhinduro kwayo yekuchengeta maoko ako akachena uye nekuchengetedza nharaunda yako yakachengeteka. Chii chimwe, tinogona kupa zvigadzirwa zvinogoneka senge saizi, ruvara uye zvichingodaro. Ehe, isu zvakare tinogona kupa akasiyana mapakeji nzira yako yakasarudzika pfungwa
Kugadzira yakanyanya kukosha yevatengi ndeye yedu bhizinesi uzivi, uye isu tiri pachokwadi kutarisira kushandira pamwe nevatengi pasi rese. Tinotenda tinokwanisa kugutsa zvakasiyana zvinodiwa nevatengi sezvo isu takakwanisa kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinoramba zvichikwira. Isu tinogamuchira neushamwari vatengi kuti vashanyire kambani yedu uye vatenge zvigadzirwa zvedu. Ive neshuwa yekunzwa wakasununguka kutaura nesu nezve bhizinesi uye isu tinotenda kuti tichagovana yepamusoro yekutengesa chiitiko chinoshanda pamwe nevatengesi vedu vese.
Pashure: Bhegi remarara
Zvadaro: Yekuputira Firimu